Tongasoa eto amintsika ny masoivohon'i Ogandà hitsidika an'i Sinocare-News-Sinocare
Tongasoa eto ny masoivohon'i Ogandà hitsidika an'i Sinocare
Fotoana: 2021-06-10 Hits: 54
Tamin'ny 7 Jona, Chrispus Kiyonga, masoivohon'i Oganda any Shina, Alice Kiyonga, vadin'ny masoivohon'i Oganda any Shina, ary Wilberforce, lefitry ny masoivoho Uganda ao Shina · Wilberforce Mugisha sy Philip Kanyoonzi, sekretera voalohany an'ny masoivoho Uganda any Sina nitsidika Sinocare. Xinyi Li, mpanampy ny talen'ny Sinocare, ary Alvin Xiang, talen'ny departemantan'ny varotra iraisam-pirenena Sinocare, dia nandray anjara tamin'ny fandraisana ary nanao dinika lalina momba ny raharaham-barotra any ivelany.
Ny masoivoho Ogandey sy ny mpiara-dia aminy dia nitsidika ny efitrano fampirantiana ny Sinocare ary nahafantatra momba ny tantaram-pivoaran'ny Sinocare sy ireo andiam-bokiny tamin'ny antsipiriany. Anisan'izany ny vokatra avy amin'ireo orinasa amerikanina roa izay nandraisan'ny Sinocare anjara tamin'ny fahazoana azy tamin'ny taona 2016 izay nahasarika ny sain'ny masoivoho Ogandey noho ny vokatra amidiny any ivelany izay be mpividy indrindra.
Tamin'ny fivoriana fifanakalozana taty aoriana dia natolotr'i Alvin ny masoivoho Ogandey ny delegen'ny vina sy fampandrosoana an'i Sinocare manerantany, ary koa ny raharaham-barotra any ivelany any Afrika. Nandritra io vanim-potoana io, ny masoivoho Chrispus Kiyonga dia niahiahy fatratra ny amin'ny fandrosoan'ny Sinocare any Oganda ary nahafantatra lalina momba izany, indrindra ny fampiasana ireo vokatra glucose ao amin'ny faritra.
Nolazainy fa ambany ny fanabeazana ny mararin'ny diabeta eto Oganda, ary mila ezaka ny roa tonta hanatsarana ny haavon'ny diabeta. Manantena ihany koa izahay fa ny Sinocare dia hanome ny mpampiasa eo an-toerana vokatra azo ampiharina sy lafo vidy hanampiana ireo marary diabeta eo an-toerana hanara-maso sy hitantana ny siramamy. Mikasika io lafiny io, taorian'ny dinika nifanaovan'ny roa tonta dia nanaiky izy ireo handamina andrana glucose sy tsimok'aretina maimaim-poana amin'ny fampianarana diabeta ao Oganda amin'ny alàlan'ny fandrindrana eo amin'ny sehatry ny governemanta.
Nandritra ny fifanakalozana, ny roa tonta dia niresaka momba ilay valanaretina pnemonia an-doha mahery vaika any ivelany. Taorian'ny nahalalany fa ny Sinocare dia namoaka vokatra fanandramana anti-satroboninahitry ny satroboninahitra vaovao, nilaza ny masoivoho Chrispus Kiyonga fa hanohy hifantoka amin'i Oganda izy. Ny filàna fitsapana COVID-19 eo an-toerana, raha ilaina dia mampiditra vokatra fitiliana haingana sy mahomby.
Pejy mialoha: Tsingerintaona nahaterahana ｜ Tsingerintaona faha-19 Sinocare
Pejy manaraka: Kitapo fitsapana antigen an'ny SARS-Cov-2 & Kit fanandramana Antibody tsy miandany no ekena haondrana